hataru/हटारु: अनसनमा रहर
प्रावि स्कुले याममा सेतो टेरिकटमाथि रातो रिबनको धर्सा हालेको गेम कट्टु लाउने रहर । जुन बेला हाइस्कुलका तन्नेरी दाइ त्यस्तै गेम कट्टु लगाएर स्कुलका वार्षिकोत्सवमा भलिबल खेल्थे । दौडन्थे । हाइजम्प र लंगजम्प खेल्थे । तीनवटा रातो धर्सा भएको सेतो टेरिकनको गेम कट्टु लगाएर आफू पनि खेल्न पाए संसारै जित्थेँजस्तो लाग्थ्यो । र, गाउँका भलिबल ओल्र्डकपजस्ता लाग्थे, कल्पदै कि एकपालि छुन पाए कति गति परिदो हो । भुरा याममा मोजाका बाल खेलेर तिर्सना मेट्न कोशिस गथ्र्यौं ।
सेतो टेरिकनमाथि रातो रिबनको धर्सावाल गेम कट्टुको रहर नफुलिकनै मुर्झायो । अचेल त त्यो गेम कट्टुसँगै पारिजातको उपन्यास पर्खालभित्र पर्खालबाहिरको पात्र रमेश अर्थात् माष्टरसाब् र उनकी श्रीमती बाटुली आउँछन् सम्झनामा । जेलबाट निस्केपछि एक रात बाटुलीलाई उनको ‘रहर’को बारेमा रमेशले सोधेको साँझमा पुग्छु । बाटुली भन्छे, ‘त्यस्तो विधि त केही छैन, भए एउटा सानो छाप्रो होस्, सानो टुक्रा वारी माटो खेल्नलाई अनि भए एउटा दुइटा छोराछोरी चकचक गरिरहेका ।’
सुनेपछि अनौठो लाग्छ माष्टरसाब्लाई । भन्छन्, ‘कठै ! ११ बर्षको एक्लोपनामा उसले पनि यति सपना र रहरको जोरजाम गरिछ ।’ माष्टरसाब् सोच्न थाल्छन्, ‘कति ससाना सपनाहरू छन् यी । यति सहज सम्भावनाहरू पनि सपना र रहरका बस्तुहरू भइदिए बाटुलीका निम्ति । यी अधिकारका कुराहरू पनि ।’
आफ्नो रहर सम्झेर आफै बक्क पर्छु ।
घाम देखे घाम राम्रो जून देखे जून राम्रो लाग्ने याममा गायकको सपना देखेँ । लिबाबाट हान्निएर नुवागाउँ पुगेँ । र, पढाइलाई बैंकलमा फालेँ । जाँच पनि दिन नपाएर भागाभाग भयो । पढाइ र संगीतको तिर्खा घोराही पुगेपछि मुर्झाउन खोज्यो । झण्डै एक वर्ष शास्त्रीय संगीत सिकेँ । सिक्दासिक्दै घरको हैसियत र मेरो रहरबीचका साँधसीमा हेरेँ । देखेँ ।
(आज पनि सपनामा लखेट्ने सगीतसित प्यार त छ तर बिहे भएन भनेजस्तो । एउटा अपूरो प्रेमजस्तो ।)
मान्छेका जातअनुसार, समयअनुसार, परिवेशअनुसार रहर, सपना र तिर्सना हुन्छन् होला । तर कहिलेकाहीँ किन असंभव रहर पनि आएर सताउँछन् हँ ? थाहा छैन । यसै त कहाँ गाए होलान् रोल्पाका बनपाखामा हाम्रा पुर्खाले, ‘नलाग मलई कल्पनाय नफल्ने डालीको ।’ तर, त्यै नफल्ने डालीको कल्पनाले लखेटिरहन्छ । पछि लागेको लाग्यै गर्छ । अनि उही नजिकनजिक भएर आउँछ र मनको कुनामा घाउ लगाइरहन्छ । र, बल्झाउँछ उही रोल्पाली बनपाखाको पुरानो लोकगीत, लो लारे कर्ममै छैन उइले लाउन्या खाँती ।
आज पनि दुईवटा रहर समानान्तररुपमा हिंडेका छन् । कहाँ लगेर थान्को लाउने ? अलमलमा छु ।
यी कहिले रहर भएर आउँछन् कहिले तिर्सना भएर कहिले सपना भएर त कहिले आवश्यकता भएर । र, चार पैसाको दाँत देखाएर तिनका सामु ङिच्च गर्छु ।
पत्रकारिताको बाटोमा लागेपछि समानान्तर हिंड्न थालेका सपना छन् एउटा एसएलआर क्यामरा र एउटा ल्यापटप । कहिले क्यामेरा अगाडि लाग्छ त कहिले ल्यापटप ।
एक्लाएक्लै भए नि स्वागत् गरौं न त भनेर योजना बुन्न थालेको पनि वर्षांै लागेछ । चार पैसाको जागिर । छाम्दाछाम्दै कता हराउँछ कता । यता ग¥यो उता ग¥यो । फुस्स । कहाँ पाएर स्वागत् गर्नु रहरलाई ? सम्हाल्नु कसरी तिर्सनालाई । र, माया गर्नु कसरी सपनालाई ?
कहिलेकसो झोक चल्छ, ‘यसै रिन उसै रिन बूढी भैसी किन भनेर लाग्छु गरौं कि क्या हो भनेर । भन्छन् नि तातो पानीले कहाँ घर जल्छ र ?
एसएलआर क्यामरा र ल्यापटपका लागि कम्तिमा लाख माथिको पैसा रहेछ । रोटीकारिता गरेर त्यति जम्मा गर्नु भनेको आकाशको फल रहेछ । महिना नढल्दै ठूलाठूला भ्वांग परिसक्छ, ग्यास, चामल, दाल, तरकारी, कापी, कलम, शर्ट, कटु, घर भाडा ...।
भन्नु हुँदो हो, रोटीकारिता नाउँको नोकरी त छ । तपाईंलाई थाहै छ नि, दायाबाया खेतबारी नहुने रोटीकारिता गर्ने खेतालाको दशा । उही त हो । अरु नोकरी जस्तै त हो नि लामो हात नगरी नफल्ने । लामो हात गर्ने न पुर्खाले सिकाए न त आत्माले ।
अँ, रोटीकारिताबाट आउँछ, महिना मरेको पाँच गतेतिर । कहिलेकाहीँ यो महिना लम्बिन्छ । धन्न टीभी र रेडियोका रोटीकारिता गर्ने साथीका जति महिना तन्किएर असी नब्बे र सय दिन पुगेको छैन ।
अनि ? जति लम्बिए पनि महिना सकिदा पसलमा नुन, तेल, चामल, भतिजा विमल र गणेशका कमिजका गोजी भ्वाङ परिसकेका हुन्छन् । घरमा कोही विरामी भए अर्को महाभारत सुरु हुन्छ ।
यताको भ्वाङ टाल । उताको टाल । टाल्दाटाल्दै भ्वाङैभ्वाङ रहन्छ ।
रहर, सपना र तिर्सना उतातिर ट्वाँ पर्छन् यतातिर म ।
तिनका सामु मेरो एउटै विकल्प हुन्छ, ‘आत्मसर्पण ।’
चोर्न, ढाँट्न, छल्न न जातले दियो न त आत्माले । भोलि के भन्ला समाजले ? कसरी मुख देखाउने भन्दाभन्दै मन नौ ठाउँमा मुच्र्छा पर्छ ।
साथीभाइ हेर्छु कोही रोटीकारितामा अल्झेका कोही अन्यमा । मजस्तै कमैया हुन् । कोहीका मेरो भन्दा पनि तनखा कम छ त कोहीका बढी । तर, सेरोफेरो उही हो । कोही मजस्तै हरितन्नम छन् त कोहीको फुर्ति हेरिनसक्नु छ । मोटरसाइकलमा सररर छन् । कोही गाडीमा । कोहीले घडेरी किनेका छन् कोहीले घर बनाएका छन् । तिनकै हातमा एसएलआर छन् किलिक्क किलिक्क पार्छन् । झोलामा ल्यापटप बोकेर कुदेका छन् । दिन बिराएर बिजुपानीमा पौडन पनि भ्याएकै छन् । चेली लिएर नगरकोट पनि पुगेकै छन् ।
तिनले यै चार पैसे जागिरले कसरी किने ?
कल्पेर दंग पर्छु ।
सायद तिनका विकासे खेत होलान् । जहाँ डलर फल्छ । आफ्नो त न खेत मालिकसँग चिनजान छ न त खेती लाउने कला नै ।
के ती सबैका खेत होलान् ?
खेत नभएका कहाँबाट ल्याउँछन् ? के हो तिनका स्रोत ?
कहिलेकाहीँ सम्झन्छु । फेरि कहिलेकाहीँ भन्छु, ए जेकै गरुन् । नजाने गाउँको के बाटो सोधिरहनु र ?
तिनका फुलेका सपना देखेर झन् रहस्यको तालमा फस्छु ।
जब रिपोर्टिङका लागि जान्छु यसो खिच्न खोज्छु तब अर्काको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । अर्काले किन दिन्छ, आफ्नो नसकाएर ? त्यसपछि एसएलआर क्यामेरा आउँछ रहर भएर । जब समाचार फाइल गर्नु पर्ने हुन्छ फिल्ड रिपोर्टिगमा गएको बेला तब आउँछ ल्यापटप । अनि एसएलआर क्यामेरा र ल्यापटप रहर होइन, सपना होइन, तिर्सना नभई आवश्यकता परिणत भएर उभिन्छन् ।
एम्बुसमा पार्छन् ।
बस्, लामो समयदेखि केही सीप नचलेपछि अनसन बसेका छन् । एम्बुसमा पारेका छन् ।
रहर, सपना र तिर्सना आधारभूत आवश्यकतामा परिणत भएपछि मन चरक्क चर्केको छ ।
सपना देख्न त पैसा तिर्न पर्दैन नि । यसैले हाम्रा फोटो पत्रकार साथीका क्यामेरा वल्टाइपल्टाइ गर्छु । ख्यालख्यालैमा कस्तो क्यामेरा अच्छा भनेर पनि सोध्छु । यसैगरी सोध्छु, ल्यापटप पनि । यस्तैमा आलु क्यामेरा र एसएलआर क्यामेरा भनेर कतै ब्लगमा लेखेको पढेर मेरो एकजना लाहुरे साथीले अनलाइनमा भने, ‘पठाइदिन्छु । कस्तो भनेर मलाई इमेल गर्नु ।’
यो कुरा केही साथीसँग भनेँ । सबले भने, ‘माग्ने माग्ने के नराम्रोमा जात फाल्छस् । माग्, गतिलै ।’
खुसुखुसु लेखिदिएँ ।
भोलिपल्ट अनलाइनमा भेट भयो । साथीहरुले लेखिदिएको पठाएँ । साथीहरुको लहलहैमा लागेर गतिलै मागेछु । त्यसपछि साथीसँग अनलाइनमा भेट हुन छाडेको छ । साथीले पक्कै पनि उखान सम्झ्यो होला, ‘गरिबलाई दिन्छु नभन्नु, ....लाई लिन्छु नभन्नु ।’
मागेर पनि रहर, सपना र तिर्सना पूरा हुन्छ र ? यदि पूरा गराए पनि अनैतिक नै भयो है ?
अचेल, एसएलआर क्यामेरा र ल्यापटप अनसन बसेका छन् । एउटा रेकर्डर पनि अनसनमा सामेल हुने धम्की दिइरहेको छ ।
औंकात र रहर, सपना र तिर्सनाबीच पानी बाराबार छ । लामो समयदेखि जारी झगडा हात हालाहालमा पुगेको छ ।
र, अचाक्ली भएर होला क्यार, सपना, रहर र तिर्सना अनसनमा बसेका छन् । थाहा छैन, कहिले पूरा हुन्छ र तिनले तोड्छन् अनसन । र, स्थिति सामान्य अवस्थामा आउला ।
बस्, मेरो औंकात र मेरो रहरबीच झगडा जारी छ । र, तिनका अनसन जारी छ ।
कहिलेसम्म जारी रहला अनसन ? के अनसनको हद म्याद हुँदैन ?
तपाईंलाई थाहा भए खबर पाम् ।
Posted by Nabin Bibhas at 9:20 AM
Meena Magar March 1, 2010 at 10:52 AM
ओ हो दाई हजुरको पनि यस्तो बेथा ? मेरो जस्तै, मैले त यसरी लेख्न नजानेर पो............. हजुरलाई त बरु साथीले आश्वासन त दिएको रहेछ न आफूत झन् सुन्ना । मान्छे नमरुन्जेल सम्म एउटा न एउटा कुराको रहरले सताइरहेको हुन्छ रे चाहे त्यो करोडपति नै किन नहोस् । रहर नै सकियो भने त फेरि मानिसको चोला नै सकिएला नि । dai lekh 1dam man paryo. i like2much.
Hari Sapkota March 1, 2010 at 1:59 PM
Khoi Bibhasg tapaile ke bhanna khojnu bhayako ho maile ta bujhnai sakina yar?
Dilli Malla March 11, 2010 at 7:21 PM
भदौरे भेलले बगाएका आधा आधी रहरहरु फेरि पनि पलाएका छन् दाई, ख्वै के गर्नु ? सपनाका त कुरै नगरौं, सपनाहरुको हुलले आँखा चिम्लन दिए पो.............। सम्झन्छु, कहिलेकाँही सपनाका थाङ्नामा सुतेका उज्याला रातहरु.....
रहर र सपना काखी च्यापेर, सास छउन्जेलको आश गर्नु भन्दा ख्वै अरु केही बाँकी छ र ?
Malla Dilli March 12, 2010 at 1:30 AM
aafno ta aalu kamera ko sapana pani patak patak mari ra 6, dai k garnu ra yo magne ka santan jasta ko katha betha kasale dekhos ra ?????
सपना देख्नु कुनै अपराध हैन भनेर हाम्लाई कुनै नेताज्युले भनेका थिए, उहिल्यैका कुरा । सााच्चै ? अपराध हैन भने देखिहालुा न त भनिकन यसो गतिलै खालको सपना देखियो पनि । शायद यो हाम्रो बालशुलभपना ? या लाक्षीपना Û? जे होस त्यो परिभाषित गर्ला समयले ।
तर....तर सपना मात्र सबथोक त कहाा रहेछ र ? सपनालाई त जीवन पनि चाहिादो रहेछ, प्रेमिकालाई प्रेमी जस्तै । हामी आˆनो सपनाको असली प्रेमी भईकन पनि सपनालाई प्रेम दिन सकेनौा, जीवन भर्न सकेनौा । सााचो अर्थमा हाम्रो सपना हाम्रै रहेन, अथवा हाम्रो भाग्यबिधाता कसैको हातको सााचो भएर गएपछि कसरी खोल्नु सपनाको ताल्चा ? दाईको कुरोमा समर्थन गर्दै यति कुरो गरुा मैले पनि ।